Wanta filuuf, wanta xiyyaan cuqaasi. Wanta tokkoo ol filuuf, wantoota naannoo goodayyaa filannoo harkisi. Wanta filannotti dabaluuf, Jijjiiraa gadqabi, akkasumas wanta cuqaasi. Wantootni waliin filaman akka gareetti ibsama, isaanis wanta garee qeenxetti jijjiira.
Maalimoota tokkoon tokkoo garee gulaaluu ni dandeenya. Akkasumas maalimoota garee CommandJijjiiraa+too'annoo.wajjiin haquu dandeessa.
Wantoota qeenxee garee irraa lama cuqaasun filuu dandeenya, yoo jalqaba hinkaane taa'e Barruu gulaaluuf lama cuqaasi kabala Filannoo sajoo irraa.
Title is: Filannoo